Vaovao - Fakan-tsary fiarovana mandeha amin'ny bateria na fakan-tsary fiarovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro?
Ny fakan-tsary fiarovana an'ny masoandro sy ny fakan-tsarimihetsika mandeha amin'ny bateria dia safidy roa amin'ny fanaraha-maso sy fanaraha-maso ireo fananana amin'ny toerana lavitra sy sarotra. Na dia misy aza ireo fitaovana novolavolaina fatratra tamin'ny sokajy roa, ny fahasamihafana dia miankina amin'ny fomba fiasan'izy ireo ny filan'izy ireo fahefana. Na dia milamina aza ny masoandro amin'ny vanim-potoana filentehan'ny masoandro, ny fiambenana dia mety hita ho voarohirohy rehefa rakotry ny rahona sy orana ny toetr'andro.
Etsy ankilany, a fakantsary fiarovana mandeha amin'ny bateria afaka miasa tsara amin'ny vanim-potoana rehetra fa mila famerenana izy ireo ka takiana loharano herinaratra. Saingy ny valiny tsara indrindra dia avy amin'ny fitaovana izay afaka manidy ny bateria sy ny herin'ny masoandro.
Ahoana ny fomba fiasan'ny fakantsary fiarovana an-kalamanjana an'ny herin'ny masoandro?
Ny fakantsary fiarovana ivelany dia ilaina maika amin'izao fotoana izao manoloana ny fitomboan'ny ahiahy. Fa ahoana no fomba anomezanao hery azy ireo amin'ny toerana tsy misy famatsiana herinaratra? Ny fakantsary fiarovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro no valiny amin'ity karazana toe-javatra ity. Izy ireo dia azo ampiasaina hanaraha-maso ireo faritra lavitra sy sarotra ny jeografika.
Izy ireo koa dia azo ampiasaina amin'ny faritra izay tsy azo ampiharina na lafo loatra ny telegrama. Trano ambanivohitra, toeram-pambolena, toeram-panorenana, trano fitobiana no toerana sasany mety kokoa amin'ny fampiasana fakantsary fiarovana ny masoandro. Ny fakantsary fiarovana ny masoandro dia mifandray amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny WiFi ary azo idirana sy hofehezina lavitra izy ireo.
Ny fakantsary fiarovana ny masoandro dia ampiasain'ny tontolon'ny masoandro izay mamorona ampahany amin'ny rafitra tafiditra. Ireo fakantsary fiarovana ireo dia tsy mila loharano mandeha amin'ny herinaratra na tariby satria ampiasain'ny tontolon'ny masoandro miorina akaikin'ny fakantsary mihitsy. Mampiasa herin'ny masoandro izy ireo amin'ny fampandehanana ireo fakantsary fiarovana ary mahazo rafitra fiarovana ianao izay tsy mitondra faktiora herinaratra isam-bolana na fiampangana famandrihana.
Matetika, ny rafitra fiarovana ny masoandro dia amidy amina fonosana mirindra izay misy tontonana masoandro, fakan-tsarimihetsika ary bateria azo averina indray. Raha tsy izany, azonao atao ny mividy ampahany DIY misaraka ary manangona azy ireo ho fakan-tsarin'ny masoandro.
Ahoana no fiasan'ny fakantsary fiarovana an-kalamanjana bateria?
Araka ny tondroin'ny anarany, ny fakantsary fiarovana an-kalamanjana misy herin'ny bateria dia ampiasain'ny bateria, fa tsy amin'ny alàlan'ny herinaratra na herin'ny masoandro. Mba hahafahan'ny fakantsary fandefasana filaminana any ivelany hivezivezy tsara nefa tsy hanimba ny endrika fiarovana azy ireo, mila manana kalitao avo lenta sy mahatohitra ny toetr'andro izy ireo. Ho an'ny fakantsary fiarovana mandeha amin'ny bateria, ny isa IP (Fiarovana Iraisam-pirenena) isa isa roa dia ampiasaina ho fenitra hanondroana ny fahafahany miaro amin'ny orana, loto, tara-masoandro sns.
Ny laharana IP an'ny 65 dia heverina ho avo indrindra amin'ny kalitaon'ny fanoherana ny toetr'andro amin'ny fakantsary fiarovana mandeha amin'ny bateria. Ireo fakantsary ireo dia afaka miasa tsy misy fahatapahana na fampandeferana ny endri-piarovana azy na dia amin'ny ririnina mangatsiaka na mangatsiaka be aza. Mijery tsy tapaka ny fanananao izy ireo, na mafy toy inona aza ny toetrandro.
Ho an'ny fakantsary fiarovana an-kalamanjana misy herinaratra mahery vaika, tsy maintsy manana fakan-tsary fahitana avo lenta izy izay manome sary mazava ny endrika sy fihetsika amin'ny alina. Ankehitriny ny fakantsary fahitana amin'ny alina dia miaraka amina fakantsary hanoanana izay afaka mamantatra ny fitafiana, tarehy, ary ireo singa hita maso hafa avy amin'ny halavirana mihoatra ny 30 metatra.
Na dia azonao atao aza ny mametraka ireto fakantsary fiarovana ireto na aiza na aiza, dia tokony hoeritreretinao ny mametraka azy ireo amin'ny faritra rakotry ny WiFi. Izany dia hiantoka fa azo antoka ny fakantsarinao fiarovana ary ampidirin'ny App azy.
Ahoana ny fomba hifehezana ny fakantsary fiarovana amin'ny fampiharana smartphone?
Ny ankamaroan'ny karazana fakantsary fiarovana dia azo fehezin'ny fampiharana miorina amin'ny Smartphone. Tsotra sy mora ny rafitra. Ireo fakantsary fiarovana ireo dia misy microprocessors solosaina ao anatiny izay itehirizana ny rakipeo sy rakipeo rehetra. Ireo data ireo dia voatahiry ao amin'ny lozisialy foibe na rahona mifototra amin'ny mpanome tolotra ihany koa. Ireo rindranasa mifototra amin'ny smartphone dia afaka miditra amin'ireo angona ireo ary koa ny tontonana fanaraha-maso ny fakantsary fiarovana.
Midika izany fa ny asan'ny fakantsary fiarovana rehetra dia azo fehezina amin'ny alàlan'ny smartphone. Anisan'izany ny firesahana amin'ny mpitsidika ao an-tranonao na dia lavitra an'arivony kilometatra ara-batana aza ianao. Azonao atao koa ny manamarina ny fahana avy amin'ny fakantsary amin'ny fotoana tena izy.
ViCOO dia fampiharana finday ho an'ny fakan-tsarimihetsika fiarovana any ivelany Aopvision. Manolotra endrika mora ampiasaina amin'ny fanaraha-maso horonan-tsary noraketina tamin'ny fakan-tsaronao. Azonao atao ny mampandeha ilay fampiharana amin'ny findainao finday na takelaka misy anao ary afaka miditra ao aminy na aiza na aiza. Azonao atao ny mifehy ny fitaovana lavitra ary mitazona takelaka amin'izay mitranga ao amin'ny tranonao.
Karazana fakantsary iza no tsara kokoa: mandeha amin'ny herin'ny masoandro sa misy herin'ny bateria?
Na dia manana tombony amin'ny fandehanana tsy misy fivoahan'ny herinaratra hisintona herinaratra aza ny fakantsary fiarovana an'ny herin'ny masoandro, manana fatiantoka izy ireo satria tsy afaka miasa amin'ny tsara indrindra rehefa tsy misy masoandro ny toetr'andro. Etsy ankilany, ny fakantsary fiarovana mandeha amin'ny bateria dia afaka mandeha ihany koa nefa tsy misy outlet misy herinaratra eo akaiky eo fa mila izany ihany koa izy mba hamenoana ny batterie, indray mandeha ao anatin'ny 2 ka hatramin'ny 4 volana.
Saingy ny vahaolana tsara indrindra dia avy amin'ny fakan-tsarimihetsika CG1 an'ny Aopvision izay mandeha amin'ny bateria nefa mifanaraka amin'ny herin'ny masoandro koa. Ity dia fakantsary fiarovana tsy misy tariby 100% miaraka amin'ny bateria 6000mAh. Ity dia fakantsary fiarovana tena tsara izay mirehareha amin'ny teknolojia misy rà mandriaka toy ny famaranana tsy tantera-drano IP65, fahitana amin'ny alina feno HD 1080P, PIR Motion Sensor, SD Card, Cloud Storage, ary Audio 2-Way.
Ny Panels Solar S1 an'ny Aopvision dia mifanaraka amin'ny batterie azo averina amin'ny CG1 Security Cameras.
Ity fakan-tsarimihetsika bateria sy herinaratra mandeha amin'ny herin'ny masoandro ity dia manana ny mampiavaka azy manaraka ireto:
- Tendrombohitra andriamby
- Tsy misy tariby
- Fanairana eo noho eo
- Fotoana maharitra
Aopvision CG1 miaraka amin'ny bateria 6000 mAh dia mety haharitra 4 volana amin'ny fiampangana tokana amin'ny tahan'ny fandraisam-peo 10 isan'andro. Ny tena tena tsara momba ny Aopvision CG1 dia ny hoe mifanaraka amin'ny herin'ny masoandro izy io. Ny batterie-ny dia mety ho voampanga amin'ny herin'ny herin'ny masoandro amin'ny alàlan'ny fampifandraisana amin'ny tontolon'ny masoandro. Mora apetraka sy ampiasaina ny Aopvision CG1. Ity fakantsary fiarovana any ivelany ity dia manana mekanika tsy misy tariby izay maharitra 5 minitra ny fametrahana azy. Tsy mila fitaovana izany. Vonona ny rafitra miaraka amina andriamby mitaingina izay mamela anao hametraka azy mora foana amin'izay tianao.
Fiarovana HD feno
CG1 dia manana fakantsary fahitana feno HD 1080P amin'ny alina izay misambotra firaketana madio sy mazava. Azonao atao ny mijery ny fahana avy amin'ny toerana rehetra amin'ny fotoana tena izy amin'ny alàlan'ny fampiharana finday ViCOO.
Ity fakantsary fiarovana any ivelany ity dia ahafahanao miresaka amin'ny olona eo am-baravarana ary efa vonona amin'ny alàlan'ny fampiharana finday ViCOO ianao. Ny fakantsary fiarovana dia misy mpandahateny anatiny sy mikrô.
Famaranana amin'ny toetr'andro IP65
Ity fakantsary fiarovana ity dia voamarina fa IP65 Weatherproof. Ity no fenitra avo lenta amin'ny fanoherana ny toetr'andro ho an'ny fakantsary fiarovana matanjaka amin'ny bateria. Izy io dia mahazaka ny toetr'andro tafahoatra toy ny tara-masoandro, orana ary lanezy.
Fakan-tsary fiarovana mandeha amin'ny herinaratra sa fakantsary fiarovana mandeha amin'ny bateria? Ireo karazany roa ireo dia mety ho safidy tsara arak'izay takinao. Saingy ilay mipaipaika ny herin'ny herin'ny masoandro sy ny batery toy ny fakan-tsarimihetsika CG1 an'ny Aopvision no tena mandresy amin'ity adihevitra ity, dia mandanjalanja tsara izany.
Fotoana fandefasana: Sep-22-2020